Dhageyso Waaliga Hiiraan Oo Ka Hadlay Dagaal Beeleedka Beledweyne. – Calamada.com
Dhageyso Waaliga Hiiraan Oo Ka Hadlay Dagaal Beeleedka Beledweyne.
calamada May 21, 2016 1 min read
Waaliga Wilaayada Islaamiga Hiiraan Sheekh Guuleed Abuu Nabhan oo wareysi gaar ah siiyay Idaacada Islaamiga ah ee Alfurqaan ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada maalmihii lasoo dhaafay sida xiriirka ah kaga dhacaya magaalada Beledweyne ee gobalka Hiiraan.
Waaliga ayaa xusay in dagaal beeleedkaasi uu yahay mid ay gadaal ka riixayaan ciidamada Ridada Jabuuti iyo kuwa Xabashida Itoobiya ee duulaanka ku jooga degmada Beledweyne.
Sidoo kale Sheekh Abuu Nabhaan ayaa ugu baaqay beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya Beledweyne iney Allaah ka cabsadaan oo ay joojiyaan dagaalka ay sida micna darada ah dhiiga isaga daadinayaan’isagoona kula dardaarmay iney dagaalkooda u badalaan mid ka dhan ah Kufaarta iyo Murtadiinta.
Hadalka Waaliga Wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa kusoo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaal beeleed ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen tobaneeya ruux uu ka qarxay xaafada Howlwadaag ee degmada Beledweyne’sidoo kale dagaal beeleedka waxa uu sababay burbur hantiyadeed iyo barakac xoogan.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 14-08-1437 Hijri.
Next: Maleeshiyaat Ka Tirsan Dowlada Federaalka Oo Bam Gacmeed Lagu Weeraray.